porn-သွေးဆောင် ED: အဘယျသို့အကြှနျုပျသရည်းစားပြောပြသလဲ? - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
သင်၏ရည်းစားနှင့်ညစ်ညမ်းမှု၊ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုစတင်ပြောဆိုခြင်းသည်ခက်ခဲနိုင်သည်။ Reboot လုပ်ခြင်းသည်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်မည်သို့သင့်လျော်သနည်း။
အသက် ၂၃ - (ED) ယောက်ျားနှင့်သူ၏ရည်းစားနှစ် ဦး စလုံးသည်ရက်ပေါင်း ၁၃၀ အား reboot လုပ်သည်ဟုဖော်ပြသည်
ငါ့ရည်းစားကိုပြောပြသည်… (reddit / nofap thread)
အစွန်းရောက် Boyfriend / Girlfriend / FWB / etc နှင့်အတူရိုးသားမှု။ , သင့်ရဲ့ PIED ပိုင်ဆိုင်နှင့် Amazing ဌာနမှူးပေးခြင်း
သိပ္ပံ:လေ့လာရေး အနိမ့်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် porn / လိင်စွဲချိတ်ဆက် ဦးနှောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုမှ activation နှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု
တစ်ဦး reboot စဉ်အတွင်းချိန်းတွေ့အဓိကအကြပ်အတည်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ဤတွင်ပုံမှန်မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။
ငါမိန်းကလေးများနှင့်ဆက်လက်ချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်ငါအလွန်စိတ်ဝင်စားဖို့တစ်ခုတွေ့ပြီထင်ပါတယ်။ ငါသူမနှစ်ကြိမ်သေးနှင့်အတူထွက်ပါပြီ။ ထိုအခါငါဒီ site ကိုတွေ့နဲ့ငါ 14 ရက်အကြာ, အအေးကြက်ဆင် PMO ထားခဲ့တယ်။ အခုငါအရမ်းထူးဆန်းနေတယ်။ ကျွန်တော့် libido ပျောက်သွားပုံရသည် ငါတောင်မှနံနက်သစ်သားသို့မဟုတ်စိုစွတ်သောအိပ်မက်တွေမရှိဘူး။ ပြီးတော့ငါ့ရဲ့ fetish စိတ်ကူးယဉ်ကိုသာနှိပ်လိုက်ရင်ငါနိုးလာတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ငါဖျော်ဖြေရတော့မှာပါ။ လွယ်လွယ်ကူကူတော့မရနိုင်တော့မှာကိုငါစိုးရိမ်တယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး ငါချိန်းတွေ့မိန်းကလေးများရပ်တန့်သင့်သလော အနည်းဆုံးငါ ဦး နှောက်ကိုပြန်ဖွင့်မလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါစိုက်ထူဖို့ပျက်ကွက်တိုင်းငါစိုးရိမ်ပူပန်မှုလိမ်သို့ကျရောက်သောကြောင့်။
လက်တွဲဖော်ရှိခြင်းဟာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူကသင် ED (သို့) နှောင့်နှေးသည့်သုတ်ရည်လွှတ်မှုရှိပါကသင် reboot လုပ်နေစဉ်အတွင်း orgasms ကိုသိသိသာသာလျှော့ချရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားရန်လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နိုင်သည်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအတောအတွင်းသင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အကျိုးရှိမည့်သင်လုပ်နိုင်သောအရာများစွာရှိသည်။ ဤနေရာတွင်အကြံဥာဏ်များ - မေတ္တာတော်၌တည်နေရန်ပျင်းရိ Way ကို (Bond အပြုအမူတွေ) နှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် Make ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်း (လိင် မပါဘဲ ) အထွတ်အထိပ်ဘို့မယ်။
အဓိကအချက်: orgasm ထားရှိခြင်းသို့မဟုတ်စိုက်ထူအတင်းဖို့ကြိုးစားနေ နိုင် counterproductive - အထူးသဖြင့်သင်၌ ED ရှိပါက၊ သို့သော်နမ်းခြင်း၊ ထိမိခြင်းနှင့်လှည့်စားခြင်းတို့ကသင်၏ ဦး နှောက်ကိုအမှန်တကယ်ဖြစ်စေရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပါ၊ ဖန်သားပြင်များမှတဆင့်အတုလှုံ့ဆော်မှုသည်လူကိုထိတွေ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲသင်၏စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ် ED ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်၏နဗ်ကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောလမ်းကြောင်းအားနည်းစေရုံသာမကသင်၏“ အစစ်အမှန်အရာ” လမ်းကြောင်းများကိုအားဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ကြည့်ပါ Porn ဖြတ်ရည်းစား?5သိကောင်းစရာများ.
အမျိုးသားများသည်နာတာရှည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေပြီးထို့နောက်ရုတ်တရက်အားလုံးအမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါလိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားပုံရသည်။ ဒါကငါ့ဘဝမှာအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တာအခုဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာငါနားလည်ပြီ။ ငါနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောပထမမိန်းကလေးသည်လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်အနည်းငယ်ဘာမှ“ မခံစားရ” သောကြောင့်ငါစိုက်ထူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အလွန်ကွာခြားပြီးအာရုံခံစားမှုကွဲပြားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားသည်။ ငါကိုယ်တိုင်ခံစားမိသောခံစားမှုကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရလျှင်ကျွန်ုပ်အတွက်တော့စိုက်ထူမှုလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။
အခုတော့ငါတည်ငြိမ်ပြီးရေရှည်ဆက်ဆံရေးရသွားပြီဆိုရင်၊ ငါလေ့ကျင့်ဖို့အချိန်အများကြီးရခဲ့တယ်။ လက်ထပ်စဉ်ကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မပြန်ခဲ့ပါ။ သို့သော်ငါကွဲကွာသွားသည်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲအကြာ (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်လည်ဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်သည်) (တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း) ။ အဲဒီအချိန်ကတည်းကကျွန်ုပ်၏ gf အသစ်နှင့်စတင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာစတင်သောအခါ၊ ထိုခံစားမှုထပ်မံမခံစားရတော့ပါ။ အစပိုင်းမှာတော့သူကသူမကိုလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်တခါငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုဘဲသွားလေလေ၊ သူမရဲ့အတွင်းပိုင်းကိုပိုပြီးခံစားမိနိုင်ပြီး၊
ညစ်ညမ်းသောအလွဲသုံးစားမှုမှပြန်လည်နာလန်ထူလာခြင်းကဲ့သို့သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောကိစ္စများကိုပြောဆိုရန်အမြဲမလွယ်ကူပါ။ သို့သော်သင်ကဤသို့ပြောနိုင်သည် -“ လူတိုင်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုဟာအန္တရာယ်ကင်းတယ်၊ ငါ့ ဦး နှောက်ကိုပုံမှန်အထိခိုက်မခံနိုင်အောင်ပြန်ထားနိုင်ဖို့ငါအချိန်အကြာကြီးလိုအပ်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကမင်းကိုအကောင်းဆုံးချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ်။ ” မင်းကိုသူမဒီစီးရီးကိုကြည့်နိုင်မယ်။ Porn ကဗီဒီယိုတွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်.
သငျသညျသူမ၏ပြောပြရန်လိုအပ်ပါတယ် တစုံတခုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဟုတ်ရင်မင်းကသူမကိုဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးလို့မင်းထင်လိမ့်မယ်။ သူမသည်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ညစ်ညမ်းသောယဉ်ကျေးမှု၏လွှမ်းမိုးမှုခံရသည်။ ၎င်းတွင်ယောက်ျားများသည်အစဉ်အမြဲကြိုးပမ်းအားထုတ်နေပုံရသည်။ သူမကို (၁) နှေးကွေးခြင်းသည်သင်၏ပြissueနာကြောင့်၊ (၂) သင်နှင့်ဆက်ဆံနေခြင်းနှင့် (၃) သင်အမှန်တကယ်သူမကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မှတပါးသူမကိုသိစေရန်အခြားနည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
သင်အပြည့်အဝပြန်လည်ကျန်းမာလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏လိင်စွမ်းဆောင်ရည်သည်ထူးခြားနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ အခြားသူများ၏“ ED Recovery Stories” ရှိလင့်ခ်များကိုဖတ်ပါ ဒီစာမျက်နှာ.
ပညာရှိသောအကွီးအကဲတစ်ဦး reboot ပြီးနောက်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ယောက်ျားတွေမှဒီအကြံပေးချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
“ ရဲရင့်ခြင်းကကြောက်လန့်သည့်အခါ၌သာရဲရင့်ခြင်းဖြစ်သည်” ဟူသောစကားတစ်ခွန်းရှိသည်။ ငါကြောက်ရွံ့မှုပတ် ၀ န်းကျင်သည်ငါကြောက်ရွံ့မည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်ဆီသို့ ဦး တည်သွားသည်။ ကြောက်စိတ်ကိုလှည့်ပတ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါဟာရေနက်ပိုင်းကိုအဓမ္မမကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ခဲ့ရပြီးရေငုပ်သင်ခန်းစာကိုလည်းယူခဲ့တယ်။ အဲဒီကြောက်စိတ်မရှိတော့ဘူး။
ဒါကြောင့်မင်းကိုလိုချင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့အတူပျော့ပျောင်းနေတဲ့ဒစ်ကိုကြောက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်ကြသည်။ အဲဒါကိုမရပ်တန့်ပါနဲ့ မင်းဟာလူမှုရေးအခြေအနေနဲ့မင်းကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့ awoman တစ်ယောက်ကမင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုပါစို့။ သင်သည်ကြောက်ရွံ့မှုဖြင့်တုန့်ပြန်နိုင်ပြီးသင်၏အားနည်းသောကြောက်ရွံ့မှုနှင့်အတူပျောက်သွားနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်စကားလက်ဆုံကျကာသင်ထွက်ပြေးရန်သင့်ကြောက်လန့်သောအော်ဟစ်နေသောအခြေအနေသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။ သူမပြောသည့်အခါ“ မင်းငါ့နေရာသို့ပြန်ချင်သလား?” မင်းကသူမကိုမျက်စိထဲမှာကြည့်ပြီး“ မင်းကိုငါအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ မင်းကလှပတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပါ။ မင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုမင်းလက်ခံချင်ခဲ့တယ်။ ငါ့မှာ ED နည်းနည်းရှိနေပြီဆိုတာမင်းကိုသိစေချင်တယ်။ ငါနင့်အတွက်အဲဒါကိုငါယူနိုင်မယ်လို့မပြောနိုင်ဘူး။
သင်ထိုက်တန်သည်ကိုကောင်းကင်ကသိသည်။ ငါနင့်ကိုပြောနိုင်တာကမင်းဟာမင်းရဲ့ခြေချောင်းတွေကိုကောက်ကွေးလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေရင်ငါဂုဏ်ယူလိမ့်မယ်” သူမသည်သူမသငျသညျကိုလှည့်မယ်လို့သံသယ။
ကြည့်ရှုပါ, ပုလ်ရှိနေခြင်းစိုက်ထူ ရုံလိင်တံစိုက်ထူထက်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အလှည့် -on ၏ပို။ သည်။ အမျိုးသားများကစွမ်းဆောင်မှုသည်အမျိုးသမီးများလိုချင်သောအရာဖြစ်သည်ဟုထင်သော်လည်းယောက်ျားများသည်သူတို့လိုလားတောင့်တသောအရာဖြစ်သည်။ မိမိ၏နတ်ဆိုးများကိုတိုက်လှန်နေသူတစ် ဦး သည်အမျိုးသမီးများအတွက်အများအားဖြင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောစွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ကိုယ်တိုင်စုပ်ယူသောအခါ၊ ထို တစ်ဦး softy ထက်တစ်လမ်းပိုကြီးအလှည့်-off ဖြစ်ပါတယ်။ ကြောက်လန့်သငျသညျကစိန်ခေါ်လာသောအခါကျုံ့ခြင်းနှင့်သင်ကကနေ run တဲ့အခါမှာပေါက်နေသည်။ သငျသညျသူ့ကိုအံသွားပေးမဟုတ်လျှင်ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိကိုက်နှင့်အတူတစ်ဦးအနိုင်ကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက 50 နှစ်သူသည်ဤအကွံဉာဏျခဲ့:
ငါပြောပေမယ့်ဖြည်းဖြည်းသွားပါ။ အလွန်အကျွံသတင်းအချက်အလက်သိပ်လျင်မြန်စွာလူတွေထွက်မထင်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကို 'တစ်ကိုယ်ရေဘဝရောက်ရင်' မင်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတဲ့အကျင့်ကိုသုံးခဲ့ဖူးတယ်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုလက်ခံခြင်းသည်အမှန်တကယ်အလွန်ဆိုးရွားစေသည်။
ငါစပြီးပြောမယ်ထင်တယ် -“ ဟေ့၊ ယောက်ျားတွေကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတတ်တယ်ဆိုတာမင်းသိလား။ ကောင်းပြီ၊ ငါအဲဒီလိုလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဖြတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့လိင်စိတ်ကိုခဏတဖြုတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ယောက်ျားတွေအတွက်တော့အခုငါအဲဒီနေရာကိုရောက်နေပြီ။ ငါဆိုလိုတာကငါပေမယ့် jr ။ တကယ်လို့တုန့်ပြန်မှုလုံးဝမရှိဘူး - မင်းငါဆိုလိုတာကိုမင်းသိရင် ရေရှည်မှာပိုကောင်းလာပြီ၊ အဲဒါဟာလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကိုငါသိတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကငါ့ဘဝမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကိုမလိုချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်တစ် ဦး တည်းသောမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝပြီးလှပတဲ့လိင်မှုကိစ္စပဲ။ ဒါကြောင့်မင်းတို့နဲ့အဆင်ပြေရင်မင်းဟာမင်းလိုချင်တာထက်ငါဟာအခြားအရာတွေလုပ်နိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ jr ဆိုလျှင်အဝတ်အချည်းစည်းရှိခြင်းနှင့်အခြားမျှော်လင့်ချက်များမရှိဘဲဖုံးကွယ်နိုင်ရုံသာဖြစ်သည်။ ငါတို့လည်းလုပ်နိုင်တာပေါ့၊
ငါထင်တာကတော့မင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဒီနေရာမှာ ၅၀/၅၀ ရိုက်ချက်ရှိတယ်။ သင်ရှောင်ကြဉ်ရမည့်အချက်မှာသူမသည်သူမ၏ခေါင်းပေါ်မှနေရာတစ်ခုသို့သူမထွက်ခွာသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤဘာသာရပ်သည်အထူးသဖြင့်ဆက်ဆံရေးအသစ်တွင်ဖြစ်သည်။
သေချာတာပေါ့၊ သေချာတာတစ်ခုကတော့မင်းကိုသူမဘယ်တော့မှအသိအမှတ်ပြုပြီး“ ငါသူ့ကိုမဖွင့်ဘူး” ဆိုတာသေချာအောင်လုပ်ရမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသူမကိုပြေးဖို့သေချာတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
ဒါကအားလုံးအလွန်တက် fucked ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေမယ့်အလွန်အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာပါသည်။ ဘာမှအပြေးအလွှားကပိုဆိုးစေသည်။
ဘ ၀ ဟာတိုတောင်းတယ်၊ မင်းတို့မိန်းကလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမင်းတို့တွေ့တဲ့အခါမင်းတို့မှာမင်းတို့တွေအများကြီးမထိန်းချုပ်ထားဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီအိတ်တွေအားလုံးကိုအသစ်ပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားတာဟာမလွယ်ကူဘူး။
TL; DR: သင်ဆုံးရှုံးရမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်သင်၏အသစ် gf ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့သင်မဖျော်ဖြေနိုင်ရင်မြန်မြန်မရှင်းပြနိုင်ရင်သူမသွားပြီဆိုတာပဲ။ သငျသညျကုန်းကြောင်းသွားသို့မဟုတ်သူမ၏ဖြစ်စဉ်တွင်တွားတွားသွားလျှင်, သူမသွားပြီ။ ဒီတော့ခင်ဗျားမှာဆုံးရှုံးစရာဘာမှမရှိဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူမသွားမလာတာတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းကပထမဆုံးပြောတာပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ဖွင့်ရန်နီးကပ်စွာမခံစားရလျှင်အနည်းဆုံးသူမ၏အားပြောပါ၊ သင်ပိုမိုနှေးကွေးစွာစတင်ပေါင်းသင်းခြင်းသည်ကြာရှည်တည်တံ့နိုင်ကြောင်းသတိပြုမိကြောင်းပြောပါ၊ ထို့ကြောင့်သူမကိုသင်အလွန်ဆိုးရွားစွာခံစားချင်သော်လည်း - သင်ဖြည်းဖြည်းချင်းစတင်နေသည် ဆက်ဆံရေးခဏကြာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်။
အတိုင်းအတာအထိစိုးရိမ်ပူပန်ပုံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သင်ယုံကြည်စိတ်ချနှင့်ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်နှင့်အတူစကားပြောနိုင်သည်မိတ်ဖက်နှင့်အတူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်နိုင်သည်, သို့မဟုတ်သင်အလွန်နှေးကွေးစွာသောအရာတို့ကိုယူနိုငျမှာအနည်းဆုံးအဘယ်သူကိုအတူ။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာသင်ရုံသင့်ခန္ဓာကိုယ် command ကိုအပေါ်လုပ်ဆောင်ကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးကများနှင့်ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်ဘယ်မှာ porn-စတိုင်မြင်ကွင်း၌သင်တို့၏ erectile တုံ့ပြန်မှုကိုစမ်းသပ်ဖို့ပညာမဲ့ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤနေရာတွင်လူအများစုဟာအများကြီးရှိပါတယ်ဘယ်မှာပိုပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသတိထားမိဟန် ပူနွေးတဲ့ချစ်ခင်ပြီးစိတ်အေးလက်အေးချဉ်းကပ်။ စိုးရိမ်ပူပန်နေတဲ့ Reboot လုပ်သွားဦးနှောက်ထဲမှာစိုက်ထူ-ပင်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသဘာဝကျပါတယ်။ ထိုအနွေးထိတွေ့စိတ်ဖိစီးမှုလျော့နည်းစေတယ်လေ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာဖိုရမ်ပေါ်မှာအမျိုးမျိုးသောလူမှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးပြောသူက ED နှင့်အတူဆိုက်သို့ရောက်ရှိပြီးနောက်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလုံးဝပြန်လည်ကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ သူက PMO မပါဘဲ ၇၁ ရက်ရှိပြီ
သင့်ရဲ့ရည်းစားအရာပေါ်မယ့်အစားသင့်ရဲ့သတိရွေးချယ်မှုထက်တစ်ခုစွဲဖြစ်စဉ်ကိုကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။ စောင့်ကြည့် ဒီစီးရီးအတူတူ။ မင်းကညစ်ညမ်းရုပ်ကိုကြည့်ပြီးမကောင်းဘူးလို့ပြောပေမယ့်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောပါ yourbrainonporn.com အကြောင်းပြောပြပြီး reboot ဆိုတာစစ်မှန်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်သင့်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်ကိုပြန်လည်ရရှိစေမယ့်နည်းလမ်းဖြစ်တယ်။ ပြီးတော့မင်းကိုသူမဆွဲဆောင်တယ်လို့ပြောပါ၊ ဒါပေမယ့်အခုအချိန်မှာမင်းရဲ့ပုံမှန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုတွေဟာပုံမှန်ဖြစ်နေပြီ သင်သူမကိုနှစ်သက်ကြောင်းသင်သိသော်လည်းသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်သည့်အခါတုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါပေမယ့်သူမကပိုပြီးအရေးကြီးတယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းတို့ကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေရှင်းသွားမှာပါ။
နောက်ဆုံးသင်ကသူမကိုတကယ်လိုချင်သည်ဟုပြောပြီး၎င်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်လုပ်နေသည်ဟုသင်ပြောပြလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်သင်သည်သူမကိုရွေးချယ်ခွင့်ပြုလိုက်သည်။ ၎င်းသည်အလိုအလျောက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်ပုံရသော်လည်းဤနည်းဖြင့်သူမအပေါ်တွယ်ကပ်နေမည်မဟုတ်။ သူမကိုသင့်အားထားခဲ့ရန်သို့မဟုတ်ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ပါ။ အားလုံး reboot ဖြစ်စဉ်ကိုပြီးနောက်အချို့သောလမ်းအတွက်သူမ၏အဖြစ်ကောင်းစွာပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မင်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဒီ reboot လုပ်ပါ။
သင်တစ် ဦး ဆွေမျိုးတစ် ဦး ၌ရှိပါကသူမ၏ပြောပြပါ! ဒီဟာကိုငါလုံလုံလောက်လောက်အလေးပေးလို့မရဘူး။ ဤအရာကိုသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထံမှမထားပါနှင့်။ သူမသည်မိုက်မဲသူမဟုတ်ပါ။ သူမကိုယ်တိုင်သူမတွက်ဆပြီးသူမအားမယုံကြည်သောကြောင့်မကျေမနပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်သူမအနေဖြင့်မှားယွင်းနေသည်ကိုတစ်စုံတစ်ရာမှတ်မိလိမ့်မည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ မင်းပြောရင်သူမတံခါးဖွင့်ပေလိမ့်မယ်။ (ငါမဖွင့်လျှင်သို့မဟုတ်သူမပါ ၀ င်လျှင်သူသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းသူမထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်၏မိန်းကလေးက ၀ န်ခံသည်။ အဆင့်များစွာတွင်သူမသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ယုံကြည်သည်။
သင်ပင်အဝေးမှသင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တူညီသောလမ်းခံစားရမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါအခွင့်အလမ်းကလုပ်ပါ။ ရုံသူမ၏ပြောပြ !!)
·ကျွန်ုပ်၏သမီးငယ်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ရက်များစွာအကြာတွင်၎င်းကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ပြီးဤနေရာတွင်နေရာယူသည်။ ဒီတစ်ခုတည်းကနေနူးညံ့တောင့်တင်းတာကိုကျွန်တော်မကြာခဏရလေ့ရှိတယ်၊ အဲဒါကကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါ။ သူမကအရာရာကိုနှေးကွေးအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကျွန်မရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိလာရတယ်၊ အဲဒါကကျွန်မရဲ့အခြေအနေကကောင်းချီးတစ်ခုပဲ။
ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိဘဝ ၈ ရက်ခန့် (MO မရှိ ၈ ရက်၊ P မပါရက်သတ္တပတ် ၅ ပတ်) သည်ကျွန်ုပ်ကြောက်ရွံ့ခဲ့သည့်အတိုင်းအတိအကျလိင်ဆက်ဆံရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ငါကြိုတင်ပြင်ဆင်နေစဉ်ခဲယဉ်းတယ်ဒါပေမယ့်အဓိကအဖြစ်အပျက်အတွက်ကထိန်းသိမ်းရန်နိုင်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏အတွင်းပိုင်းဆွေးနွေးမှုသည်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းဖြစ်ခဲ့သည် (“ shit, shit, shit …နောက်တဖန်မဟုတ်၊ NOW NOW”) ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်မဟုတ်။
·ထိုအချိန်တွင်ငါလှိမ့်ချအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာ "ကောင်းပြီ, သင်တို့ကိုငါတစ်ခုခုပြောပြရန်လိုအပ်သည် ... " ဟုပြောသည် ကနေစာရင်းဇယားအချို့ကိုကိုးကားပြီးနောက် ဆရာဝန်တစ်ဦးနှင့်အတူဒီအင်တာဗျူးကျွန်မထပ်တလဲလဲ (1) ဒီမဆိုလမ်းအတွက်သူမ၏အမှားမကြီးနှင့် (2) ကယာယီဖြစ်ပြီးငါက fix သွားသူဖြစ်ကြောင်းကိုမှုကိုအလေးအနက်, PIED ၏အကျဉ်းရှင်းပြချက်ကိုပေး၏။ ငါသည်လည်းငါပထမဦးဆုံးကိုယ့်အားလုံးအတုဆွထွက်ခုတ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်နောက်တဖန်အမှန်တကယ်လိင်အဘို့အကြှနျုပျ၏ဦးနှောက် rewire ဖို့လိုအပျကွောငျးကိုပိုမိုတစ်လအစောပိုင်းကထက်သူမ၏တွေ့သောအခါငါ porn မှာရှာဖွေနေရပ်တန်သူမ၏သို့ပြောသည်။
·သူမကဒီအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဒီယူခဲ့ပါတယ်။ သူမသည်ပြုံးလိုက်ပြီး (အနည်းငယ်ရယ်မောမိသည်) သူမ၏အမှားဖြစ်နိုင်သည်ကို စိုးရိမ်၍ သူမဖွင့်ပြောသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ (သူမကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံနှင့် ပတ်သက်၍) အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိကြောင်း၊ ယခုမှ စ၍ ကျွန်ုပ်၏အော်ဂဇင်များကိုသူမအတွက်သာထားရှိမည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အရာရာဟာအချိန်နဲ့အမျှပိုကောင်းလာမယ်ဆိုတာကိုသိပြီးစိတ်ရှည်ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်။ လင့်ခ်
Day7- လိင်ကိစ္စရှောင်ရှားရန်မုသားအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၅ ရက်တွင်ပြန်ကြားချက်အားလုံးကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖတ်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏ရည်းစားနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ Man ... ငါလုပ်ခဲ့သမျှထဲမှာအခက်ခဲဆုံးပဲလို့ငါထင်တယ်။ ငါသူမကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့စပြောတယ်၊ ငါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုမှားနေတာဘယ်လိုလဲ ကျွန်တော့်အသံကစပြီးစစငိုငိုတော့တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရွံရှာသလိုခံစားရတယ် ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါပြောခဲ့တဲ့အချစ်ဆုံးစကားလုံးကတော့ "စိတ်မပူပါနဲ့။ အားလုံးကောင်းသွားမှာပါ၊ ငါတို့အတူတကွဒီကိုဖြတ်သန်းသွားမှာပါ” အင်း၊ ငါဒီမိန်းမကိုချစ်တယ်
ငါအဆုံးသတ်ငါအဆုံးသတ်ငါ၏အ gf သူမကြောက်မက်ဘွယ်နှင့်ထောက်ခံဖြစ်ခြင်းပါပဲ။ ဒီအကြောင်းကိုသူမအားပြောပြခြင်းသည်ကျွန်ုပ်ဘဝတွင်အခက်ခဲဆုံးအရာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါအရမ်းအားနည်းချက်ကိုနှင့်မသက်မသာအရမ်းရယ်ရတယ်ခံစားရတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးပိုပြီးနီးကပ်စေခဲ့တယ်။
ငါ့ရည်းစားက ၁ နာရီခွဲလောက်မှာငါနဲ့အတူနေတယ်။ ငါက porn ကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီးငါ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုအကန့်အသတ်မရှိအကန့်အသတ်မရှိဖယ်ရှားပစ်တော့မယ်လို့သူ့ကိုပြောခဲ့တယ် (ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကြည့်တာကိုသူသိတယ်။ ) အရာရာဟာငါ့မျက်နှာသာရစေတယ်၊ ​​ကျွန်တော်တို့ဟာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မတွေ့ရတာ၊ ဒါဆိုငါတို့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကထွက်ခဲ့ကြတာပါ။ ငါ (ငါလွန်ခဲ့သောတစ်လရှိရာနေရာကပေးထားသော ၇၀% ခန့်သည်အလွန်ကောင်းသည်၊ ) သည် ၃၁ ရက်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတကယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိင်အတွေ့အကြုံကွဲပြားခြားနားခဲ့သည် ခံစားခဲ့ရ သူမသည်ငါတစ်ခုခုခံစားခဲ့ရပေမယ့်မနေ့ကကဲ့သို့မဟုတ်ခဲ့မီ။
ငါသည်လည်းငါ၏အရည်းစားကိုပြောသည်။ ငါကဒီမှာအပေါ်ယောက်ျားတွေအများကြီးဒီလိုလုပ်ဖို့မသေချာမရေရာသို့မဟုတ်ကြောက်လန့်ကိုငါသိ၏။ ယောက်ျားတွေကျွန်မအခုသင်ပြောပြနေပါတယ်: စားပွဲပေါ်အိုင်တီအားလုံးထားတော်မူ၏။ ဟုတ်ကဲ့စကားဝိုင်းမှရှက်စရာနှင့်အဆင်မပြေခဲ့ပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတစ်ခုကိုရိုးရိုးသားသားတဦးတည်းနှင့်သာဆက်လက်နိုင်ကြောင်းဦးတည်းဖြစ်ဆက်ဆံရေးအဘို့အလို့ငှာဖွလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါ YBOP မှသူမ၏ link ကိုပေးတျောမူအထူးသဖြင့်လာသောအခါအကြှနျုပျ၏ရည်းစား, ကံကောင်းထောက်မစွာနားလည်မှုဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်ညကငါ့ရည်းစားကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်ပေးခဲ့သည် ကျနော်တို့ခဏတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းချိတ်ဆက်နေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အဲဒီ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းသောစိုက်ထူမှုတစ်ခုကိုငါပြန်ရခဲ့တယ်။ သူတို့ဘယ်လိုပေါ်လာသလဲဆိုတာထူးဆန်းပေမယ့်မပြည့်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူမငါ့ကိုခေါင်းပေးခဲ့တယ်ငါအော်ဂဇင်မယ်မဟုတ်ပေမယ့်မတော်တဆဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါနောက်ဆုံး O. ကတည်းကဆယ်ရက်ခဲ့ပထမတော့ငါအရူးဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ၏အစိတ်ပျက်၏ရလဒ်အဖြစ်ငါသည်ငါ့ပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူမ၏သို့ပြောသည်။ ထိုသို့အရေးကြီးသောခဲ့တာငါဖြောင့်မဆိုလိင်, ပါးစပ်လိင်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲတစ်လကို go, ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲသူမ၏ရန်ဘာပဲလုပျနိုငျသညျ။ ဤကွီးစှာသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ရုံပြီးပြည့်စုံသော။ အခုတော့နှစ်ဦးစလုံးကကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ငါလအပြီးသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်အဘယ်အရာကိုမျှမပေးရန်သူမ၏ပြောတယ်။
ငါ့ရည်းစားကငါနဲ့မဆိုင်ပါဘူး ငါသူမကိုမပြောခဲ့ပါ ကျွန်မလိင်မစမ်းခဲ့ဘူး၊ သူမကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သူမတကယ်ရန်လိုသည်၊ ကျနော်တို့ဘာမှအများကြီးမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်သူမကြောင့်ငြီးငွေ့လာတယ်။ ငါသူမ၏စိတ်ပျက်နားလည်နိုင်ပါတယ်။ ငါမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး၊ အောင်မြင်မှုမရရှိရင်ငါတကယ်တုန်လှုပ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ ငါစိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်သွားတဲ့သူနဲ့အတူ ED နောက်ဆုံးကုသမှုခံယူခဲ့တယ်။ ငါသူမကိုအရမ်းကြိုက်တယ်၊ ငါတို့မှာစိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်နွှယ်မှုတစ်ခုရှိတယ်၊ ကျွန်မသူနဲ့တော်တော်လေးသက်သောင့်သက်သာရှိပေမယ့်လိင်စိတ်နည်းတာကြောင့်လိင်စိတ်ကိုမလိုချင်ခဲ့ဘူး။
ငါအခုအချိန်မှာမိန်းကလေးအနည်းငယ်ကိုတွေ့နေတုန်းပဲ။ သူတို့အားလုံးနှင့်အလွန်နှေးကွေးနေသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏“ စမ်းသပ်မှု” အကြောင်းကိုဖွင့်ဟရန်အတင်းအကျပ်စေခိုင်းနိုင်သောအခြေအနေမျိုးတွင်မရှိသေးသော်လည်းလိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်လိုပါသည်။ ယခုအချိန်တွင်မိန်းကလေးများနှင့်ပြုလုပ်နေစဉ်ကျွန်ုပ်သည်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီး၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြသပါသည်။ ဒီနှိုးဆော်ခြင်း၏ဤပြည်နယ်အတွက်ဖြစ်ခြင်းသော်လည်းလွယ်ကူသော်လည်းထပ်မံသွားငြင်းဆန်အောင်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ငါဒီမိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ (သူမဒီညကိုမြင်နေရတာ) ဒီလောက်ကြာတာမို့မယုံနိုင်လောက်အောင်များပြားသောမေးခွန်းများကိုမကြာမီစတင်စတင်လိမ့်မည်ဟုခံစားမိသည်။ “ ငါမသွားနိုင်တော့ဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့လောလောဆယ်ငါကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်မှုလုပ်နေတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံသင်္ကာဖြစ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအားလုံးကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာရှောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ဟုခံစားရသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၊ စွဲလမ်းမှုသို့မဟုတ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်အမင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ ငါသည်လည်းသင်နှင့်တူ၏။ ငါ PMO မရှိတစ်ပါတ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ငါကအရမ်းချိုလွန်းသောကြောင့်, အရှုံးမပေးပါလိမ့်မယ်, ဒါမှမဟုတ်ငါကငါ့လိင်စိတ်ကိုအားဖြည့်မယ်လို့မျှော်လင့်ချက်အတွက်ပဲလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤအရာသည်အခြေအနေများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ သင်သည်သင်၏လိင်စိတ်အမြဲပျောက်ကွယ်သွားပြီးသင်၏လိင်တံအလွန်သေးငယ်သောကြောင့်ပင်သင်၏အစာအိမ်ထဲသို့ပြန်လည်လိပ်လိပ်လိပ်ကဲ့သို့ပြန်လည်နုတ်ထွက်လာမည်ကိုသင်စိုးရိမ်သောကြောင့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် - အချို့လူများသည်လပေါင်းများစွာ - ကိုဖြတ်သန်းရလိမ့်မည်။ ကြောက်စရာပါပဲ အဲဒါတကယ်ပါ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
သင်ဟာစည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့လူတစ်ယောက်လိုပဲပြေးနေရင်းခုံတန်းလျားကနေအသံထွက်ထွက်လာတယ်။ သင်သည်သင်၏လိင်စနစ်ကိုဓာတုဗေဒအရထိခိုက်နစ်နာစေပြီးယခုတွင်၎င်းကိုသရုပ်ပြပြီး၎င်းကိုကုစားရန်လိုအပ်သည်။ တကယ်လို့မင်းကမင်းသာဖြစ်ခဲ့ရင်ဒီဟာကငါကိုတသမတ်တည်းဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဂရပ်စက္ကူတစ်ချပ်ရလိမ့်မယ်။ မင်းဟာ PMO မပါဘဲနေ့တိုင်းသွားပြီးသေတ္တာထဲကနေအရိပ်မကျခင်မှာဖြစ်နိုင်တယ်။ သင်ထပ်ခါတလဲလဲပြန်ဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင်သည်ကောင်းသော“ ပြေး” သွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုသဘောသဘာဝသည်ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်၊ သင်မသိရှိမီ ၂ လကျော်သွားပြီးသင်ပုံသဏ္againာန်ပြန်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
ငါအခု ၂ လကျော်သွားပြီ။ အခြေအနေတွေကအများကြီးပိုကောင်းလာတယ်။ ပြန်လည်ထူထောင်နေစဉ်မှာဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေဖို့ဆိုရင်၊ ဆက်ဆံရေးကနှစ်လစောင့်ဆိုင်းလို့မရဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်နှစ်လကြာကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အတူမယှဉ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ငါပြောလိမ့်မယ်၊ ထို့နောက်ကြောင်းဆက်ဆံရေးကနေနှစ်လချွတ်ယူပါ။ ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်တွေရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်ဒီကိုဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်၊ ဒါကို ဦး စားပေးလုပ်ပါ။ ကံကောင်းပါစေ!
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကဒီမိန်းကလေးဟာကျွန်တော့် ED ပြbeenနာကြောင့်စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်ရဘူး။ သူမသည်ယခုအချိန်တွင်သူမနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်နေသည် (၆ လလိင်ဆက်ဆံမှုကိုတားမြစ်ခြင်း) ဖြစ်သောကြောင့်သူမအားဖိအားမပေးသောသူတစ် ဦး အားရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စိတ်သက်သာရာရသွားသည်။ ငါတို့ဘဝ၏ဤအချက်များတွင်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းသည်အရူးဖြစ်သည်။ အချိန်ကောင်းသည်ပြည့်စုံလွန်းလှသည်။
ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, ငါ့ဟောင်းတကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ့ ED ကိုယူ။ အဲဒီအချိန်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့လဲ၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲမသိဘူး၊ ဒါကြောင့်သူမရှင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်။ အိပ်ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဟာအမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်ပျက်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်မရဲ့ရည်းစားအသစ်ကိုမကြာသေးခင်ကကျွန်မရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသမိုင်းကြောင်းနဲ့ကျွန်မဖြတ်သန်းနေတဲ့အရာတွေကိုပြောပြဖို့အချိန်တန်ပြီ။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဟုခံစားရသည်။ သို့သော်ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေ [လိင်မှုကိစ္စများစွာမရှိသောလိင်ဆက်ဆံမှု] ပြီးနောက်သူမကိုယုံကြည်စိတ်ချပြီးသူမသိထိုက်သည်ဟုခံစားရသည်။
ဒီည (၂၁) ညမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အံ့ဖွယ်အရာတစ်ခုအကြောင်းပြောပြရန်ပုံပြင်အသစ်တစ်ခုကျွန်ုပ်ရရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု / သီအိုရီများကိုကျွန်ုပ်လက်ရှိအခြေအနေတွင်ပြန်လည်တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုစိတ်ကူးယဉ်ကိုရှာဖွေနေသည်။ ကျွန်ုပ်အဖို့၊ နောက်ဆုံးချည်မျှင်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၎င်းသည်ချည်အားလုံး၏အင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်ပုံရသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းကကျွန်တော့်အားနည်းသော ဦး နှောက်ကိုလှေပေါ်မှအသက်ကယ်လှေထဲသို့ပစ်ချသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ခြင်းကသူ့ကိုရေပေါ်မျော။ ရေထဲသို့ပစ်ချခြင်းနှင့်တူသည်။ ငါစိတ်ကူးယဉ်စိတ်တွေပျောက်သွားတဲ့အခါငါ့ ဦး နှောက်က“ ဟေ့၊ ဘာလဲလူပဲ!” သွားနေသလိုခံစားရတယ် ငါ floaty ဆုတ်ခွာအဖြစ်။ ပြီးတော့နက်နဲတယ်။ ဤသည်မှာကျွန်ုပ်သည်နေ့မှ ၁၆ ရက်မှယနေ့ (၂၁) ကြားကာလအတွင်းခံစားခဲ့ရသောအရာများဖြစ်သည်။
ငါ (ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ယခုရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုနေပါတယ်တစ်ခုတည်းသောမျိုးဖြစ်သော) တစ်ဦးအလိုအလျောက်စိုက်ထူမှီနိုင်ပါတယ်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်ပေါ် နေ. ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သောဤခံစားမှုရှိသည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာစိတ်ကူးယဉ်သို့ပြန်သွားကြသည်ဒါသွေးဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားသကဲ့သို့ဦးနှောက်က ပို. ပို. မနှောမြော။ ကောင်းမွန်သောသတင်းပါ (စိတ်မရှည်များအတွက်သတင်းဆိုး) ဖြစ်ပါသည်သင်ကစိတ်ကူးယဉ်၏သွားနှင့်အဖြစ်မှန်နေရာမှယူခွင့်ပြုပါရန်စတင်ကြကုန်အံ့အတိုင်း, သင်တို့၏စိတ်စိတ်ကူးယဉ်ဖို့လျော့နည်းထိခိုက်မခံဖြစ်လာမှစတင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ကိုယ့်ကြောင့်ဘာမျှမ (flatline) ကိုနှိုးဆွသောအပုံရသည်ဘယ်မှာအချိန်ကာလများတွင်ရလဒ်လက်တွေ့ကိုင်စွဲဖို့စတင်မတိုင်မီကစိတ်ကူးယဉ်ဖို့ sensitivity ကိုရှုံးကြောင်းရှာတွေ့ပါ၏။ အလွန်ကြောက်စရာ။ ! သို့သော်ကြောက်ရွံ့ရိုသေဖို့မလာမယ့်အပိုဒ်ကိုကြည့်ပါ:
ငါအံ့သြဖွယ်လှပသောအသိဉာဏ်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အတူယနေ့ညချိတ်ဆက်။ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏အတိတ်မှတစ်စုံတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အမြဲတမ်းကြိုက်ခဲ့သည်၊ သူမငါ့ကိုစာပို့သောအခါသူမသည်မနက်ဖြန်ည (ယနေ့ည) ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်တွေ့မြင်ချင်ကြောင်းစာပို့သောအခါကျွန်ုပ်အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ငါ reboot မလုပ်ဘူး၊ ပိုဆိုးတာကငါ flatline ပဲဆိုတာငါသိတယ်။ နောက်တစ်နေ့တွင်၎င်းစစ်ဆေးမှုအကြားတွင်ကျွန်ုပ်၌အရေးကြီးသောစာမေးပွဲတစ်ခုရှိခဲ့ပြီး၊ ထိုမိန်းကလေးနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာလုပ်ရမှန်းစဉ်းစားမည်ကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်လုံးဝအိပ်မပျော်ခဲ့ပါ။ ဒါကြောင့်အနားယူစရာမလိုတော့၊ ၄ နာရီစာမေးပွဲဖြေပြီးမျဉ်းဖြောင့်နှင့်နေပြီးနောက်သူမကိုစာပို့ပြီးကျွန်တော်သူမကို ၈:၀၀ နာရီတွင်တွေ့လိုသည်။
ငါပြန်ဖွင့်ပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်အထိသူ့ကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်တာဟာမတူဘူးဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်တယ်၊ ဒါကငါသိသမျှအားလုံးအတွက်နောက်ထပ်ရက်ပေါင်း ၆၀ ကျော်။ ငါအခုသွားရမယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာချိတ်ဆက်လိုက်ပြီးငါလုပ်ခဲ့လို့ ၀ မ်းသာမိပါတယ်။ ကျနော်တို့ညစာအနည်းငယ်သောက်စရာများနှင့်ပစ်ခတ်ရေကူးကန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ငါတို့ကားနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးထုတ်လုပ်ကြတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့အဲဒီမှာဘာမှမခံစားဘဲနေပေမယ့်နွေးထွေးမှုနဲ့သွေးစီးဆင်းမှုတိုးပွားလာခြင်း။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွခြင်းနှင့်လုံးဝထဲသို့ဝင်ခြင်းသည်ထူးဆန်းသော်လည်းစိုက်ထူခြင်းမရှိပါ။
နောက်ဆုံးတော့ငါထင်တာကတော့ငါတို့အားလုံးကြောက်လန့်တုန်လှုပ်စရာပါပဲ။ ဒါက shitty အခိုက်ပဲ!
အားလုံးလှည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဒီနေရာမှာငါဒီလိုစဉ်းစားမိတယ် -“ ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရတာလဲ၊ BS ကိုအကြောင်းပြချက်တခုခုလုပ်နိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ် Fn တစ်ယောက်ကိုကြီးထွားလာအောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ပြီးတော့သူမကိုညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှု၊ rebooting နဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုလုံးအကြောင်းကိုပြောပြပြီးသူတို့ချစ်ပ်တွေကိုသူတို့ဘယ်မှာကျစေမလဲဆိုတာကိုပေါ့။ မေလ
ဒါကြောင့်ခဏလေးစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်မှာသူမကိုအမှန်တရားပြောပြလိုက်ပါတယ်။ သူမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဦး နှောက်ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုသူအရမ်းနားလည်ခဲ့ပါတယ်။ ငါကအဲဒါကိုနှေးနှေးအောင်လုပ်ရမယ်၊ ငါ reboot မလုပ်မချင်းတစ်လျှောက်လုံးသွားဖို့မကောင်းဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်လိင်၊ ချစ်ခြင်း၊ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအလွန်စိတ်အားတက်ကြွစေသောစကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုနောက်တဖန်ထွက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။
အမှုအရာတွေပိုပူလာပြီးသူမငါ့ကိုပွတ်တိုက်လာတာနဲ့အမျှနောက်ဆုံးတော့ငါဟာခက်ခဲလာတယ်။ ငါဘယ်တော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒါမှမဟုတ်ဘာမှမထိခဲ့ပါဘူး ကျနော်တို့2နာရီထွက်အောင်ခဲ့ကြရပေမည်။ ဒါဟာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါကအများစုအစိတ်အပိုင်းအတွက်သန့်ရှင်းစွာထားရှိမည် - အဘယ်သူမျှမဘောင်းဘီသို့မသွား။ သူမသည်လည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့နှစ် ဦး စလုံးအစစ်အမှန်ဆက်သွယ်မှုခံစားရတယ်။ ငါတကယ်ကဒီမိန်းကလေးကိုကြိုက်တယ်နှင့်နောက်ထပ်အရာတို့ကိုလိုက်ရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။
နေ့က ၁၅ ရက်မှာကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကစက္ကန့် ၂၀ လောက်မှာစိုက်ထူနိုင်ပေမယ့်တကယ့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ရဖို့ ၁၅ မိနစ်လိုအချိန်ယူခဲ့တယ်။ ဤအရာသည်မျိုးဆက်ပွားမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး၏စိတ်ကူးယဉ်နှင့်တကယ့်အရာတို့အကြားကြီးမားသောကွာခြားမှုရှိသည်ကိုပြသသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သော်လည်း Flatline သည်အကြွင်းမဲ့မဟုတ်ကြောင်းလည်းပြသသည်။ အဲဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပြီးနောက်ငါစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တာတောင်မခံစားရဘူး။ ငါသူမနောက်တစ်ခါပြန်တွေ့သည်အထိစောင့်ချင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ BF ၏ PMO သည်ကျွန်ုပ်ကိုအမှောင်ထုထဲသို့တမင်တကာတွန်းပို့လိုက်ပုံနှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတွင်အလင်းအဘယ်ကြောင့်ရှိနေသည်ကိုသတိပြုပါ။
ယောက်ျားတွေ (နှင့်မိန်းကလေးများ) မင်္ဂလာပါ
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ - ငါဟာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ၊ ဒါကြောင့်မင်းကဒီမှာမိန်းကလေးတွေတင်တာကိုဆန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်စာမဖတ်ပါနဲ့။ ဒါဟာအချို့များအတွက်အစပျိုးဆံ့လိမ့်မယ်။
ဒုတိယအချက် - ငါဒီဟာပို့စ်တင်နေတယ်၊ ​​ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကလူတချို့ကိုကူညီနိုင်မယ်လို့ငါတကယ်ယုံကြည်တယ်။ ဒါ့အပြင်အင်္ဂလိပ်ဟာကျွန်တော့်ရဲ့ပထမဆုံးဘာသာစကားမဟုတ်ပါ။
ဒီမှာအသက် ၂၆ နှစ်ရှိပြီ။ ငါ့မှာအရမ်းကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ရှိတယ် (၃၂) ။ ငါတို့လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကမှတစ်ခုခုမှားနေတာအထိငါတို့မှာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့တယ်။
အစပိုင်းတွင်သူသည်လိင်မှုကိစ္စကိုရှောင်ရှားခဲ့သည်။ 4-6 ပတ်တိုင်းမှာငါတို့သာလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြတာပါ။ သူဟာအမြဲပင်“ ငြီးငွေ့” ပြီးစိတ်မဝင်စားပဲ၊ “ အလုပ်မှာစိတ်ဖိစီးမှု” အကြောင်းပြောခဲ့တယ်၊ “ ဘဝဆိုတာမင်းသိတဲ့လိင်ကိစ္စမဟုတ်ဘူး” - သူကပြောခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကို၊ မိမိအသွင်အပြင်၊ ကျွန်တော့်အတွက်တော့လိင်မှုကိစ္စတောင်မှကျွန်တော်မရင်းနှီးချင်ခဲ့ဘူး။ ငါသူ့ကိုအမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ်ငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားစေချင်တယ်လိုချင်ချင်တယ်။ သို့သော်၎င်းသည်မတည်ရှိပါ။ အလုပ်ခွင်၌လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကကျွန်ုပ်ကြည့်ကောင်းပုံကိုထပ်မံဖြည့်စွက်သည်။ ယောက်ျားအချို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုထိုနေရာတွင်ရိုက်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းအိမ်၌မူဘာမှမရှိပါ။ ပြီးတော့ငါတို့လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါအဲဒါဟာအရင်တုန်းကလိုမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ အလိုအလျောက်ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ နောက်မှပွေ့ဖက်။ နမ်းခြင်းနှင့်ရှေ့ပြေးအဘယ်သူမျှမ။ လိင် - အော်ဂဇင် - မင်းလိုချင်တာကိုရပြီ၊ ငါ့ကို ၄ ပတ်လောက်ထားခဲ့ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးနှင့်ပတ်သက်သောအခြားရှုထောင့်များသည်အဆင်ပြေသည်ဟုထင်ရသဖြင့်ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်သန်းနေရသောကြမ်းတမ်းသောကာလတစ်ခုသာဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်။ ငါစိတ်ရှည်ဖို့နဲ့နားလည်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါလိင်တောင်းဆိုနေတာတော့ဘူး။
အဲဒီပြproblemsနာတွေစပြီးမကြာခင်မှာပဲကျွန်မရဲ့ရည်းစားဟာအဆိုးရွားဆုံး၊ ဝေးကွာသော၊ သူကမိုက်မဲသောမှတ်ချက်များကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ ဘာမှတကယ်မဆိုးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်သူကငါ့ကိုတော့မကြိုက်တော့ဘူး…
တခါတရံသူသည်ထိုတွင်ထိုင်။ သူမစိတ်ဝိညာဉ်ကင်းမဲ့နေပုံရသည်။ ဒီနှိုင်းယှဉ်မှုကကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပုံရရင်ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကသူ့ကိုငါအတိအကျပုံဖော်ခဲ့တယ်။ သူသည်အခြားလူများကိုရှောင်ရှားပြီးသူကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်၊ အပြင်ထွက်မသွားခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်မကြာခဏပင်“ ကျွန်ုပ်တို့သည်အသက် ၇၀ မပြည့်သေးပါ၊ ဘဝဘ ၀ ၌ပျော်မွေ့ကြပါစို့” ကဲ့သို့မှတ်ချက်ပေးလေ့ရှိသည်။ t အလုပ်ဖြစ် ငါသူ့ကိုပွေ့ဖက်ပြီးကြက်ကိုနမ်းသောအခါငါမည်သည့်တုံ့ပြန်မှုကိုမှမရခဲ့ပါ။ ငါတို့အတူတူရုပ်ရှင်ကြည့်နေတုန်းငါသူ့ကိုနူးညံ့စွာမှီခိုဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ လူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုခံစားခဲ့ရဖို့သူက“ ငါ့ကိုမချစ်ပါနဲ့၊ ငါကိုယ်တိုင်သက်သောင့်သက်သာရှိပြီးရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ချင်တယ်” လို့ပြောလိမ့်မယ် ။
ငါဘာမှားသလဲဆိုတာမသိခဲ့ဘူး သူသည်ဤကဲ့သို့သော“ ထိတွေ့သော” လူစားမျိုးမဟုတ်ပါလား။ ဒီတစ်ခါလည်းသူကသူ့သဘောသဘာဝခဲ့သလဲ ဒါမှမဟုတ်ငါအရမ်းလွန်းချင်သလား နောက်လ၊ နှစ်တွင်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။
ငါသူဖြစ်လာနေတဲ့ချမ်းအေးတဲ့လူကိုငါမုန်းခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ကပိုပိုပြီးမကြာခဏငြင်းခုံစတင်ခဲ့သည်။ ပြီးတော့တစ်လမှာတစ်ကြိမ်လိင်ဆက်ဆံဖို့၊ နှစ်လတစ်ကြိမ်ကျွန်မကိုသတ်ခဲ့တယ်။ ငါမကြာခဏငိုခဲ့ရသည် (များသောအားဖြင့်သီးသန့်ဖြစ်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံသူမရှေ့မှောက်၌ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အားဘာလုပ်နေသည်ကိုသူနားလည်စေရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မကူညီခဲ့ပါ) ။
တစ်ခါတလေတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလှည့် ငါသူ့ကိုမလိမ်ချင်ဘူး၊ ငါ့လိင်ကတကယ့်ကိုကြီးပြင်းခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့လုံခြုံမှုမရှိဘူး၊ မပျော်ဘူးလို့ခံစားရတယ်။ ငါနေတဲ့အိမ်မှာလူတစ်ယောက်လိုချင်တယ်၊ ဈေးဝယ်ထွက်ပြီးငါ့ကိုအလုပ်လုပ်စေမယ့်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။
ငါတခြားယောက်ျားအကြောင်းကိုစိတ်ကူးစတင်ခဲ့သည်။ ထိုအခါငါကအခြားသူတစ် ဦး နှင့်အတူဘဝ, ချစ်ခင်, နွေးတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူစိတ်ကူးလိမ့်မယ်။ ငါ့လက်ကိုကိုင်ချင်သူ၊ ညအချိန်တွင်ငါ့ကိုဖက်နိုင်သူ၊ လိင်ကိုကြိုက်သူ ညမှာအဲဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားပြီးငါ့ရည်းစားဘေးမှာလဲလျောင်းနေတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းကငါ့ကိုထက်တကယ့်လူတစ်ယောက်ထက်စက်ရုပ်လိုပဲ။ လတွေအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ငါစိတ်ဝင်စားတဲ့တခြားယောက်ျားတွေကိုသတိပြုမိလာတယ်။ ငါပျော်နေတုန်းသူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုဘယ်တော့မှအာရုံမစိုက်ခဲ့ဘူး၊ ဒါပေမဲ့အခုသူတို့ရဲ့ကောင်းတဲ့စကားကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်လိုခံစားလာအောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ ဒီလူတွေထဲကတစ်ယောက်မှငါမထွက်ခဲ့ဘူး၊ သူတို့ကအရမ်းကိုဂရုစိုက်တတ်တဲ့၊
လွန်ခဲ့သောတစ်ပါတ်ကကျွန်ုပ်၏ရည်းစားသည်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုအကြီးအကျယ်စွဲလမ်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါသူ့လက်ပ်တော့ပ်ကိုငှားပြီးဒီအရာအားလုံးကိုမြင်ခဲ့တယ်။ သူနဲ့သူနဲ့“ ချိတ်ဆက်” ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့လတွေအားလုံးကိုသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားတယ်။ Porn မင်းသမီး။ သူသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ“ ချိန်းတွေ့ခြင်း” ဆိုဒ်များတွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးထိုတွင်ရှိအမျိုးသမီးအချို့ထံစာတိုများပို့ခဲ့သည်။ လူငယ်၊ အို…သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကကျွန်မအမေလိုပဲဟောင်းတယ် သူမသည်ဆွဲဆောင်မှုမရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တကယ့်ဘဝ၌ကျွန်ုပ်ခံစားဖူးသောခံစားဖူးသူတစ် ဦး မဟုတ်ပါ။ ထိုအခိုက်အတန့်၌ငါရှိခဲ့သော beakdown ကိုဖော်ပြရန်မလွယ်ကူပါ။
ငါသူ့ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ သူကပြိုကွဲသွားပြီးသူဟာ PMO စွဲသူဖြစ်တယ်ဆိုတာဝန်ခံလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ။ သူဟာလိင်ကိစ္စကိုစိတ်မ ၀ င်စားဘူးလို့သူထင်ခဲ့တဲ့အချိန်တစ်လျှောက်လုံးသူမသည်နံနက်တိုင်းနီးပါးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရေချိုးခန်းထဲ၌တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့သည်။ သူဟာရေချိုးခန်းထဲမှာအချိန်အများကြီးသုံးရတာကိုကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှတ်မိသေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ငါအမြဲတမ်းဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ သူက "အဲဒီယောက်ျားတွေ" ထဲကတစ်ယောက်လို့ငါမထင်မှတ်ခဲ့လို့ပါ။ တုန်လှုပ်ချောက်ချားစရာကောင်းလိုက်တဲ့။ လုံး ၀ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားတယ်။ ခင်ဗျားမြင်တာက porn ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကသာမန်လိင်ကိုမရသူတွေပါ။ လှပသောအမျိုးသားများသည်သူတို့၏နံနက်ခင်းကိုသူတို့၏လိင်အင်္ဂါများနှင့်မထိတွေ့ကြပါ။ ကျွန်တော့်အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး
သူရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်အဲဒီနေရာကိုပြောင်းရွှေ့မသွားတဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ပဲ။ ငါလာမယ့်ရက်တွေအတွင်းမှာငိုကြွေးအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။ ငါဘာတွေကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုတာအသေးစိတ်မရှင်းပြချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒါကတွေ့ကြုံဖို့အကြောက်အရွံ့ဆုံးပဲ။ အမျိုးသမီးတစ် ဦး အနေနှင့်ကျွန်ုပ်၏ကမ္ဘာသည်ပြိုလဲသွားသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။ သူသည်“ ထိုအမျိုးသမီးများ” ကသူ့ကိုနှိုးဆွပြီးကျွန်ုပ်ထက် ပို၍ နှစ်သက်သည်ကိုသိရခြင်းသည်အလွန်စိတ်ထိခိုက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါ porn စွဲသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေသည်သင်၏brainonporn, ဒီဖိုရမ်, အခြားဆိုက်များရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် ... ကျနော်တို့အများကြီးစကားပြော။ အများကြီး။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်အတွက်သူ့အတွက်ထားရှိသောခံစားချက်များကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူကသူကရိုက်နှက်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ပြောတယ်။ ၎င်းသည်သူ၌ကြီးမားသောပြBနာရှိသည်ကိုသူပထမဆုံးသဘောပေါက်ကြောင်းထင်ရှားလာခဲ့သည်။ သူကဘာကြောင့်စောစောစီးစီးသတိမထားမိတာလဲဆိုတာကျွန်တော်နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ! ဤသည်ကသူ့ကိုအလွန်မှောင်မိုက်သောအရပ်သို့တွန်းပို့နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်သူ၏မိသားစုနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်သူ၏ဘဝမှဝေးကွာသွားစေသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အတွေးအမြင်ကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်မရေမတွက်နိုင်အောင်မရေမတွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါကကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၌ပြproblemနာတစ်ခုရှိကြောင်းသေချာပေါက်ပြောနိုင်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏အသက်တာ၏အကောင်းဆုံးနှစ်များတွင်ဖြစ်ရန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောသူတို့ကိုဖြုန်းတီးရန်…သူသိကောင်းသိလိမ့်မည်။ လိင်မှုကိစ္စနှင့် ပါတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိရန်ကျွန်ုပ် ပို၍ နားလည်သည်။
သူအခုသူ့ကိုညစ်ညမ်းတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာခေါ်နေတယ်ဆိုတာသူမသိနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်တယ်။ အဘယ်ကြောင့်? အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ငါသည်လည်းထိုလမ်းကိုစတင်ခဲ့ပြီးအနီရောင်တောက်ပနေသောအရာများကိုသတိမပြုမိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်ရေဘဝထက်ဆက်ဆံရေးနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါမပျော်သော်လည်းဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသိခဲ့ပါ။ တခြားသူတွေကိုငါအပြစ်တင်ခဲ့တယ် ငါ့ကိုဘယ်မှာယူသွားမှာလဲဆိုတာဘယ်သူသိလဲ
ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့အထိတော့ကျွန်မဟာညစ်ညမ်းတဲ့အရာလို့မမြင်ခဲ့ပါဘူး။ စင်စစ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုအမြဲတမ်းပွင့်လင်းစွာသဘောထားခဲ့ဖူးပြီး၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသင်သိပါကသင့်အားမနာကျင်နိုင်ဟုထင်မြင်ခဲ့သည်။ ဒါက B * S ပါ။ သင်သုံးလျှင်၎င်းသည်သင့်ကိုစိတ်ထိခိုက်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုဝမ်းနည်းစေပြီးအထီးကျန်ဖြစ်သွားစေသည်။ မပျော်။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးမှထွက်သွားနိုင်သည့်ကောင်းသောအရာမရှိပါ။ PMO ကသူတို့ဘ ၀ တွေအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာလူတွေကိုပိုပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောစေချင်ပါတယ်။
ငါတို့အချင်းချင်းနီးပါးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ငါကတိတိကျကျဖြတ်သန်းသွားမယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ပတ်ပဲရှိသေးတယ်။ သူ့ပြproblemနာကနောက်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ သူကနှစ်ပေါင်းများစွာကပုန်းအောင်းခဲ့သည်။ သူသည်ဤခရီးကိုခက်ခဲလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။ တဖန်ငါသူ့ကိုတဖန်ယုံကြည်စိတ်ချရ, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်, အခြားအမျိုးသမီးများနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိုင်းယှဉ်ရပ်တန့် ... ဒါဟာခက်ခဲပါလိမ့်မယ်: / သို့သော်သူ၏စိတ်နှလုံးနှင့်စိတ်ကိုနေရာမှန်၌ရှိကြ၏။ ငါ့ဥစ္စာလည်းဖြစ်ကြ၏။
ဒါကြောင့်ဒီရက်ပေါင်း ၉၀ မှာ PMO အခက်အခဲမရှိဘူး။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပြန်လည်ပေါင်းစည်းလိမ့်မည်ဟုစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်မျှော်လင့်မိသည်။ ငါရိုးသားစွာနဲ့ငါ့ဘဝကိုဒီလိုမသုံးချင်ဘူး ထိုအခါငါသူအတူတူခံစားရတယ်ငါသိ၏။
မင်းဒါကိုမင်းရှာတွေ့ပြီးမင်းဟာမင်းဒီ sh * t ထက်အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဆိုတာကိုမင်းသဘောပေါက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ သင့်ဘဝကိုအမှန်တကယ်ဘဝကစောင့်နေသည်။ ထူးဆန်းသောမိန်းမများခြေထောက်များဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ကျပန်းယောက်ျားလေးများအကြားတွင်သူတို့ကြားတွင်ရှိနေသောအချိန်ကိုမကြည့်ပါနှင့်။ : /: /: /
ငါဒီပြconcerningနာကိုရည်မှတ်မျှဝေဖို့အမြန်ပုံပြင်ရှိသည်။ ငါ fap / watch မကြည့်ဘူးဆိုတာသူတို့ကိုပြောပြတဲ့အခါမိန်းကလေးတွေဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာမကြာသေးမီကပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ပူမိသည်။ ကောင်းပြီ၊ မနေ့ညကမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုစနေ၊ ကျနော်တို့စုံတွဲတစ်တွဲနာရီစာပို့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်မှာသူမကငါဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမေးသော်ငါရုပ်ရှင်ကြည့်နေသည်ဟုသူမ၏သို့ပြောသည်။ သူက“ အကယ်လို့မင်းကတကယ်ကိုဖျော်ဖြေရေးကိုတကယ်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ရဘူး။ "သူမကငါ့ကိုသူမသို့မဟုတ်အတူ idk တစ်ခုခုနှင့်အတူ sext ဖို့ကြိုးစားနေခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ ငါအဲဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဆိုသူမကိုအမှန်တရားကိုပဲပြောလိုက်တယ်၊ အဲဒါကငါမကြည့်ရှုနိုင်တော့ဘူးလို့ခံစားမိလို့ porn မကြည့်တော့တာပါပဲ
သူမသည်သိလိုစိတ်ပြင်းပြစွာဖြင့်ယောက်ျားအားလုံးလုပ်သည်ဟုသူမထင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ငါသူမကိုအများဆုံးလုပ်ခဲ့တယ်ဟုပြောသော်လည်း၊ အများစုကလည်း၎င်းကိုအချို့သောအဆင့်တွင်စွဲနေပြီး၎င်းသည်သင့်အားတကယ့်အရာသို့အထင်မသေးပါ။ ငါတကယ်စစ်မှန်တဲ့အရာရှိမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်၊ ငါမလုပ်ရင်မိန်းမတွေကိုပိုပြီးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းစိတ်ဝင်စားတယ်။ သူမသည်သူမဤမျှလောက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်စဉ်းစားပုံနှင့်ကျွန်ုပ်အားပိုမိုကောင်းမွန်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေရန်နှင့်သူမမိန်းကလေးမျိုးစုံနှင့်မည်သို့ဆက်ဆံရမည်ကိုသူမနောက်ဆုံးတွင်ပြောခဲ့သည်။ အဓိကအချက်ကသူမသည်ကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုပြုလုပ်နေသည်မှာအလွန်ကောင်းသည်ဟုထင်ပြီးအမျိုးသမီးအများစုသည်လည်းအလားတူခံစားကြလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ယောက်ျားတွေ၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမကြည့်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုးသားဖို့မကြောက်ပါနဲ့။ ငါထင်တာကအများစုကဘာပဲဖြစ်ဖြစ် porn ကိုမကြည့်ချင်ကြဘူး။ ဒါ့အပြင်မင်းကမင်းရဲ့ဘဝကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းပိုရှိစေတယ်။ ချောက်ကမ်းပါးများ -
- porn မကြည့်ဘူးတဲ့မိန်းကလေး
ငါရပ်တန့်ဘာကြောင့် -she ဟုမေး
ဒီကတဆင့်တစ်ဦး gf ရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုသငျသညျထိုပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူမ၏ပြောပြရန်တတ်နိုင်ကြသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထိုသူအပေါင်းတို့ကအကြောင်းကြားကဘာလဲဆိုတာဒါမိန်းကလေးများကသဘာဝတွင်လည်းများမှာ😀 Plus အားသင်ကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်ကြိုးစားနေကြသောအခါမိန်းကလေးတစ်ဦးကချစ်တယ်။